phyodaybyday – Page4– Classy and Fabulous
လူသိများတဲ့မိတ်ကပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ အယူအဆအမှားများနဲ့ အမှန်ပြင်ဆင်ချက်များ
Like	11,756 Comments all, beauty, home-post-slider
How to Glowing Makeup?
Like	4,476 Comments all, beauty, home-post-slider
Like	4,822 Comments all, home-post-slider, Review
Like	2,045 Comments all, home-post-slider, Review
Beauty Myth and Truths
Like	5,209 Comments all, beauty, home-post-slider
February 27, 2017 December 6, 2018
Like	1,663 Comments all, beauty
အချစ်လေးတို့ရေ ကိုယ်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးထဲက လူဦးရေအများစုဟာ spa facial နဲ့သိပ်မရင်းနီးကျဖူး ။ Facial ကိုလည်း အထူးအခမ်းအနား အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိမှ သွားလုပ်ကြတာများတယ်လို့ ကျွန်မယူဆပါတယ် ။ မသွားဖြစ်တာရော သိပ်ရင်းနီးမှုမရှိတာရောကြောင့် ဘာတွေလုပ်ပေးတယ်ဆ်ိုတာကို မသိကြပါဘူး ။ အဲ့ဒါလေးတွေကို တစ်ဆင့်ချင်းစီနားလည်အောင် ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်…
Like	4,617 Comments all, Review, Style
Like	12,805 Comments all, Style
Leave On exfoliate
Like	4,150 Comments beauty
Leave On Exfoliants ဆိုတာဘာလည်း ? ဟိုနေ့ကပြောဖို့ကျန်တဲ့ AHA BHA တွေအကြောင်းဆက်ပြောမယ်နော် ။ သူတို့ကိုတော့ leave on exfoliants တွေလို့ခေါ်ပြီး Scrub တို့ Clarisonic brush တို့နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကွာခြားပါတယ် ။ Alpha Hydroxy Acid (…
December 17, 2016 April 30, 2017
Like	4,988 Comments all, beauty
Skin Type VS Skin Concern !!! မင်္ဂလာပါချစ်တို့ရေ ။ ကျွန်မအခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ အမျိုးသမီးကြီ ကြီးငယ်ငယ်မရွေး Skincare ပေါ်မှာအာရုံစိုက် စိတ်ဝင်စားလာကြတာကိုပါ ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း skin ကို အလွန်ဂရုစိုက်ဖြစ်သူ Skin ကောင်းလာတာတွေလည်း မျက်မြင်ထင်ရှားတွေ့နေရတာလေးတွေရှိလို့ အမျိုးသမီးတော်တော်များများက…